Kondomu remadzimai rino chengetedza hutano	Thursday, 23 May 2013 08:28	naElsie MojapeloKONDOMU remadzimai harina kujairika sezvinoita revarume, pakuwanikwa kwaro kunyangwe pakutaurwa nezvaro. Kondhomu remadzimai rinodeedzwa nekuti FC2 rakapfava uye rinogadzirwa nemucheka wekaplastic unonzi “nitrile”.
Kubika chimukuyu chenhoro chine dovi	Thursday, 23 May 2013 08:25	naKenneth ChikeyaZvinodiwa: Chikari kana potoChipunu, mugotiDovi, hanyanisi, matomatisi, munyu nemvura
Mabikiro:Cheka nyama kuita zvidimbu zvaunoda wosuka matomatisi nehanyanisi pamwe nekucheka zvose.Chigadza poto kana chikari pamoto, isa mvura uye kana yafashaira wochitora nyama woisa imomo wokwidibira zvombokwata kweawa nechidumbu.Isa hanyanisi nematomatisi worega zvombokwata kwemaminitsi gumi wozoisa zvipunu zvitatu zvedovi nemunyu mushoma.Raidza kuti zvaringana here wobura.Usavi uhu munogona kudya nesadza remhunga, remupunga kana rezviyo.Kudya kwechivanhu kunokuridzirwa sezvo kuchinzi kune upfumi neutano.
ZPS yakavarapa pachena	Thursday, 23 May 2013 08:10	naMalven MugadzikwaZIMBABWE Prison Services (ZPS) svondo rapera yakabatsira vagari vekuUzumba-Maramba-Pfungwe vanosvika 640 nekuvarapa pachena zvirwere zvakaita sezvemazino nemaziso pamwe chete nekuvapa zvekudya.
Kubika chimukuyu chehwai chine dovi	Thursday, 16 May 2013 08:54	naKenneth Chikeya Zvinodiwa:
Chikari, poto kana paniMugoti, chipunu
Nyama neutano hwako	Thursday, 16 May 2013 08:50	naElsie MojapeloKUNE vanhu vakawanda pasi rose vakarega kudya nyama nekuda kwezvikonzero zvakasiyana izvo zvinosanganisira chitendero nekuda kuchengetedza mhuka. Vamwe vanoti upenyu hwekusadya nyama hunobatsira kudzivirira zvirwere zvakaita sedzimwe mhando dzegomarara Read more...
Tsvigiri iri muchikafu neutano hwako	Thursday, 09 May 2013 11:34	naElsie MojapeloVANHU vakawanda vanofarira chikafu chine tsvigiri kana kuti shuga asi ikasadyiwa zvine mwero ine matambudziko mazhinji ainogona kukonzera kuutano hwemunhu. Shuga iri muboka rechikafu chinopa simba chinonzi ma”carbohydrates”.
Kubika muriwo wekabichi zvine musiyano	Thursday, 09 May 2013 11:31	naKenneth ChikeyaZvinodiwa:Poto, kahari kana pani
Tsuro mudovi mudya ndakasungwa	Friday, 03 May 2013 00:00	naKenneth ChikeyaZvinodiwa:Chikari, poto, pani
Kudya kwakanaka	Friday, 03 May 2013 00:00	naElsie MojapeloKANA kuchitaurwa nezvekudya kwakanaka hakusi kutaurwa nezvichikafu chinodhura kwete asi kunenge kuchitaurwa nezvekudya:
chikafu chinobva mumapoka ose zvinoita kuti uwane simba, kudzivirira zvirwere nekuvaka muviri.
Kubika nyama yehanga ine dovi	Monday, 29 April 2013 12:37	naKenneth ChikeyaZvinodiwa:Chikari, poto kana pani
Zvekudya zvinokurudzirwa pazvirwere zvevana muchando	Monday, 29 April 2013 12:33	naElsie MojapeloVANA vakawanda vanorwara munguva yechando yatava kupinda nezvirwere zvakaita sedzihwa, maronda pahuro kunyangwe kurwadziwa nemudumbu. Izvi zvinonyanya kuvana vanoenda kuchikoro kunova ndiko kunotapuriranwa zvizhinji zvezvirwere izvi.
Kukamira mwana mukaka waamai	Friday, 19 April 2013 13:06	naElsie MojapeloMUKADZI wose anofanirwa kugona kukamira mwana mukaka wemuzamu kuitira nguva yaanogona kutadza kuyamwisa mwana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.Kusvinira mwana mukaka wemuzamu kunobatsira:
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »	Page 1 of 123	Search	Sponsored Links